I-Sentul Little Home-Sweet-Home @SentulCity
Nethezeka ezindaweni eziphakeme ezintsha zaseSentul, imizuzu eyi-10 nje ukusuka kumgwaqo okhokhelwayo waseBogor-Jakarta. Indlu yethu encane isanda kulungiswa futhi ihlomele izimpelasonto zomndeni. Futhi kuyisisekelo esihle sokuhambela imicimbi eminingi yokugijima, yamabhayisikili, neyegalofu e-Sentul.
Indawo yethu ingemuva kweposi lokuvikela: iphephile futhi ithulile. Inqwaba yokuzijabulisa nokuzilibazisa kuhambo lokuhamba e-Taman Budaya, kanye nokuqhela kancane: Jungleland. Futhi imizuzu engama-20 ukusuka eSentul International Convention Center (SICC).
Ingaphakathi elikhanyayo nelikhanyayo, elinomoya opholile onophahla oluphezulu egumbini lokuphumula.
4.92(108 okushiwo abanye)
4.92 · 108 okushiwo abanye
Indawo ethule ngemva kwendawo yokuhlola ezokuphepha, enomoya ovunguzayo wasezintabeni nobusuku obupholile.
Uhambo lwemizuzu engu-5 nje ukusuka epaki lokungcebeleka lase-Taman Budaya elinezindawo zokudlela (okuhlanganisa isiNtaliyane, ibhega, i-organic, isi-Indonesian), izindawo zekhofi (Polo, Kopi Oey), indawo yokuphuzela u-icecream, amakhefi, izitolo ezilula, nezokungcebeleka ezingaphandle (isb. izibhamu zopende).
Futhi nje ukuhamba ngemizuzu emi-4 ukusuka echibini lokubhukuda laseSentul Highland Golf Course, imizuzu eyi-10 nje ukusuka eJungleland, imizuzu engama-20 ukusuka eSentul International Conference Center (SICC), kanye nemizuzu engama-25 ngomgwaqo okhokhelwayo osuka eBogor Botanical Garden ebabazekayo nedumile.
Sihlala eduze, futhi siyatholakala ukuze sisize izivakashi zethu ngamaminithi nje. Vele usishayele noma umlayezo.